Itiyoophiyaa: Tarkaanfiin humnaa mormii ukkaamsuf fudhatame namoota dhibbaatamaan lakkaawwaman ajjeesise – OROMP4 Studio
weerara hamma malee
Ati anaaf addaa
seeqee na seeqsisaa kolfaa
Addaan baasaa jennaan
Dhibbaaf kumaa keessaa
Guyyaan ati yeroo jalqabaaf
Uruurseen raffisaa onnee koo madoofte
yyaa gara waaree
The best part of my day is your smile.
Ofii hirkoo qabatee
Ati oonnee kootii
Soba maltu fidee
Roobni waqtii arfaasaa
Gubaa jaalala kee
21st June 2016 16th March 2019 Gadaa Hunde
Daarkiteerri dhaabbata mirga namaa hordofu, Hiyumaan Raayit Wochii kan taate Lesilee Lafkaw akka dubbattetti “humnoonni nageenyaa Itiyoophiyaa, lubbuu namaaf tufii guddaa argisiisun, baratoota, qonnaan bultoota fi mormitoota nagayaa irratti dhukaasun ajjeesanii jiru.Mootummaan hatattamaan namoota badii tokko malee hidhaman gadi yaa dhiisu, miidha gahe ilaalchisee qorannoo bilisaafi amanamaa ta’e yaa dhiheesu, humnoota nageenyaa tarkaanfii kana fudhatan seeratti yaa dhiheesu.
Source: Itiyoophiyaa: Tarkaanfiin humnaa mormii ukkaamsuf fudhatame namoota dhibbaatamaan lakkaawwaman ajjeesise
Namoonni badii tokko malee hidhaman gadi yaa dhiifaman, qorannoon bilisaa ni barbaachisa
(Naayiroobii) – Hiyumaan Raayit Wochiin gabaasa har’a baasen, humnoonni nageenyaa Itiyoophiyaa yeroo mormiin Oromiyaa keessatti baldhinaan gaggeeffamen Sadaasa 2015 eegalee namoota 400 ol kan ajjeesan yoo ta’u kan kuma kudhaniin lakkaawwaman immoo hidhanii jiru. Mootumman Itiyoophiyaa ragaa amanama ta’en akka utubu, qaama bilisa ta’e tokko hundeesun waayee namoota ajeefamanii akka qoratu, waayee namoota badii tokko malee hidhamaniifii dhiitamuu mirga namaa adda addaa gabaasa akka dhiheesu.
Gabaasin fuula 61 qabu “tarkaanfii gara jabinaa mormii ukkamsuu, ajjeecha fi hidhaa, deebii mootummaan Itiyoophiyaa mormii Oromooti kenne” jedhu baldhinaan akka ibsetti, mootummaan Itiyoophiyaa sochii mormii kana cabsuuf humna barbaachisu ol fayyadamuu, jamaa hidhuu , mana hidhaa keessatti hidhamaa miidhuu, fi mala namni odeeffannoo akka hin arganne gochuutti dhimma bahee jira jedha dhaabbanni mirga namaa hordofu kan afaan Ingiliiziin Hiyumaan Raayit Wochi jedhamu. Hiyuman Raayit Wochin gaafif deebii namoota biyya keessa akkasumas biyya alaa jiraatan wajjin Sadaasa 15 eegalee hanga Caamsaa 2016 gaggeesen, mormitoonni 125 ol, kara deemtonni fi midhaan adda addaa kan irra gahe, dhoorkaa cimaa yaada ibsachuu, mirga waliitti qabamuu dhoorkamuu humnoota nageenya eeggisiisaniin akka irra gahe himatanii jiru.
Daarkiteerri dhaabbata mirga namaa hordofu, Hiyumaan Raayit Wochii kan taate Lesilee Lafkaw akka dubbattetti “humnoonni nageenyaa Itiyoophiyaa, lubbuu namaaf tufii guddaa argisiisun, baratoota, qonnaan bultoota fi mormitoota nagayaa irratti dhukaasun ajjeesanii jiru.
Mootummaan hatattamaan namoota badii tokko malee hidhaman gadi yaa dhiisu, miidha gahe ilaalchisee qorannoo bilisaafi amanamaa ta’e yaa dhiheesu, humnoota nageenyaa tarkaanfii kana fudhatan seeratti yaa dhiheesu.
Hiyumaan Raayit Wochiin gabaasa har’a baasen, humnoonni nageenyaa Itiyoophiyaa yeroo mormiin Oromiyaa keessatti baldhinaan gaggeeffamen Sadaasa 2015 eegalee namoota 400 ol kan ajjeesan yoo ta’u kan kuma kudhaniin lakkaawwaman immoo hidhanii jiru. Mootumman Itiyoophiyaa ragaa amanama ta’en akka utubu, qaama bilisa ta’e tokko hundeesun waayee namoota ajeefamanii akka qoratu, waayee namoota badii tokko malee hidhamaniifii dhiitamuu mirga namaa adda addaa gabaasa akka dhiheesu.
Humnoonni nageenyaa rasaasa dhugaa fayyadamuun deddeebi’anii namoonni akka walitti hin qabamne gochuun mormii tokkorratti yoo xinnaate nama tokko yookin sana ol ajjeesun ji’oota qubaan lakkawwaman keessatti mormitoota dhibbaan lakkawwaman ajjeesanii jiru. Hiyumaan Rayit Wochiif dhaabbileen biroo namoota du’an keessaa namoota 300 maqaan muraasa immo suuraa isaan wajjin adda baasanii jiru.
Mormiin Sadaasa darbe ka’e, sodaa karoora mootummaan Finfinnee baballisuuf baase, kan Maastar Pilaanii Qindaa’aa Magaala Finfinnee jedhu mormuun kan eegaleedha. Mormitoonni akka jedhanitti Mastar Pilaanichi haala waggoota kurnan darban muldhateen qonnaan bultoota lafarraa buqqisuun, namoota naannoo magaalicha jiraatanirratti dhiibbaa guddaa fiduun namootni muraasni qofti akka fayyadaman godha jedhu.
Mormiin kun Muddee keessas yoo itti fufu mootummaan mormii kana too’achuuf loltuu bobbaase. Humnoonni nageenyaa of egannoo tokko malee yookin meeshaa qaama namaa hin mine osoo hin fayyadamin rasaasa dhugaa jamaatti dhukaasaa turan. Kanniin ajeefaman keessa irra caalan barattoota yoo ta’an daa’imani waggaa 18 gadiis keessatti argamu.
Poolisiin Feedaraalafi loltuun, barattoota kumaataman lakkaawwaman, barsiistota, weellistoota, miseensota paartii mormitootaa, hojjatoota fayyaafi namootaa baratoota poolisii jalaa baqatan daheesan hunda hidhaa turan. Namoonni baayyen qabamanii hidhaman baayyen gadi dhiifamanis, kanniin lakkoofsi isaanii hin beekamne, himanni osoo irratti hin banamani, gorsaa seeraa fi maatii isaanitiin osoo wal hin argin hafanii jiru.
Namoonni dhugaa bahan akka ibsanitti gaaga’umsi gahe hanga yaadamuu olidha. Namni Yoosef jedhamu, kan umuriin isaa 52 , Wallagga Lixaa kan jiraatu akka ibsettii “umurii koo guutuu asin jiraadhe. Gaaga’uumsa akkasii tasuma argee hin beeku. Nama hidhuufi ajjeesun baramee jira. Namnii yoo xinnaate maatii tokko hidhaadha hin qabne hin jiru”.
Namni kana dura hidhamee bahee Hiyumaan Raayiiti Wochiitti akka himetti, mana hidhaa keessatti darara suukaneessan akka isaaniirra gahe, haalli hidhamaan mana hidhaa keessatti qabamu jibbisiisa akka ta’e, kaampii waraanaa faa keessatti hidhamaa akka turan, dubrtoota baayyee irratti gochi suukaneessan akka gudeeduu fi tutuqaan walqunnamtii saala adda adda akka irratti raawwatamu ibsee jira. Namoonni tokko tokko akka ibsanitti, jilba isaanii hidhun, mataa isaanii gadi dhundhulchuun faana isaanii keessa reebama akka turan, kan biroo immoo faanni miila isaanii humna ibsaatin akka waaddame kan hafan immoo qaama saala isaanirratti wanti ulfaatu hidhamaa akka ture dubbatanii jiru.
Viidiyoon kun barattoonni mooraa Yunivarsiitii keessaatti enna reebaman argisiisa.
Aangowwan mootummaa namoota baayyee qabanii hidhanis namoota muraasarratti himannaa banu. Miseensonni paartii siyaasaa mormitootaa hedduunifii gaazexeesitoonni seera farra shororkeessumma adabbii cimaa qabu kanaan kan himataman yoo ta’u barattoonni Yuunivarsiitii Embasii Yunayitid Isteet, Finfinneetti argamu fulduratti Bitootessa keessa hiriira bahan seeraa yaakka adda addaatin himataman.
Sababii humnoonni nageenyaa naannoo mana baruumsaa fi mana baruumsaa keessatti argamaniif, barsiisonnii fi barattonni waan hidhamaniif, barattoonni baayyeen humnoota nageenyaa kana waan sodaataniif sirna baruuf barsiisuurratti rakkoon uumamee ture.
Aangowwan mootummaa mormicha dhaabuf iddoo tokko tokkotti mana baruumsaa torbeewwan muraasaf cufanii ture. Barattoonni tokko tokko Hiyumaan Raayiti Wochitti akka himanitti loltoonni mootummafii humnoonni nageenya biroo mooraa keessa mandhefataniin barataa Oromoo gatii ta’aniif qofa akka sakata’amaniif akka ifataman ibsanii jiru.
Iddoo tokko tokkotti mormitoonni lafa qonnaa abba qabeenya biyya alaan qabame barbaddeessuu, gamoo mootummaa saamuu fi qabeenya adda adda mootummaa akka barbaddeessan ragaan qabatamatu jira. Haa ta’u malee Hiyumaan Raayit Wochiin mormii 500 ol ta’an keessaa 62 ilaalee irra caalana isaanii karaa nagaan kan gaggeefaman ta’uu hubatee jira.
Ugura mootummaan Itiyoophiyaa qoratoota mirga namaa bilisa ta’aniifi miidiyaa dhuunfarra kaa’ee irraa kan ka’e odeeffannoo muraasatu naannoo mormii kanaa dhufaa jira. Mootummaan Itiyoophiyaas bilisummaa miidiyaa takaaluf tattaafii guddaa godhe. Bitootessa walakka eegalee feesibookifii midiyaa hawwaasaa irratti takaallaa kaa’ee jira. Bufata teelevizyiin daayasporaas ummanni akka hin ilaalle uguree jira.
Amajji keessa mootumman Mastar Pilaanicha akka haqe ibsee ture. Yeroo sanatti garuu deebiin gara jabuummaa mootumman mormitootarratti fudhate garaa mormitoota hammeesee ture.
Mormitoonni saba Oromoo Olonkomii, Finfinneerra gara kibba dhiyaatti 60 km irratti argamtutti humnootni tikaa mootummaa mormitoota irrati dhukaasa erga bananiin booda, Mudde 15, 2015
© 2015 AFP/Getty Images
Mormiin ummataa Ebla irra eegalee qabanaa’a dhufus tarkaanfin humnoonni mootumma fudhatan akka itti fufee jirachuu Hiyumaan Rayit Wochiin raga argatee jira. Namonni hedduun qabamanii ji’a turban darbe hidhuma keessa kan jiran yoo ta’u dhibbaataman kan lakkawwaman iddoon isaan jiran kan hin beekamne yoo ta’u gochi kun humnaan dhabamsiisuu akka ta’e beekamee jira. Mootummaan dhiittaa mirga namaa kanarratti qorannoo gaha hin gaggeesine. Loltoonni ammallee moora Yuunivarsiitii keessa waan jiraniif sodaa guddaatu jira. Sagaleen mormii bara 2014 xinnaas ta’u hanga amma kan itti fufe yoo ta’u tarkaanfiin gara jabinaa mootumman fudhatu baroottan dhufu keessa mormii kana daraan akka hammeesaa deemuu tilmaamama jedha Hiyumaan Raayit Wochi.
Tarkaanfiin gara jabinaa mootumman Itiyoophiyaa mormitoota nagayaa irratti fudhatu deebii cimaa fi walta’insa mootummolee dhimmi kun ilaalu, gumii mirga namaa mootummaa gamtoomanii dabalatee barbaada jedha Hiyumaan Raayit Wochiin. Manni marii Awurooppaa ibsa ijjannoo cimaa tarkaanifii humnoonni nageenyaa fudhatan balaalefatu baasus, ibsi ijjannoo biroo gochaalee humnoota nageenya kana balaalefatu seneetii Yunayitid Isteetiif dhiyaatus isaan kanarra kan hafe ummanni addunyaa waaye dhiitamuu mirga namaa Oromiya keessatti gahe kana waan jedhan hin qaban.
Gumiin Mirga Namaa Mootummaa Gamtoomanii dhiittaa mirga namaa hamaa kana xiyyeeffannoo kennuun, namoota badii tokko malee hidhaman akka gadi dhiifaman fi qorannoon bilisaa dhiitamu mirga nama kana ilaalchise akka gaggeefamu gargaaru qaba.
“Biyyoonni alaa mootummaa Itiyoophiyaa kara adda addaan deegaran yeroo humnoonni nageenya mootummaa Oromiyaa keessatti dhiiga nama hedduu dhangalaasan ni callisan” jetti Lafkaw. “Biyyoonni guddina Itiyoophiyaa dhaadhesan,mootummichi gara hundaanu guddina akka argisiisu keessaattu mirga dubbachuu fi warri miidhame haqa akka argatan dhibbaa gahaa gochuutu irra jira eegama.
Ameerikaan guyyaa Adoolessa July) 4 Lallaba wolabummaa / Declaration of Independence on July 4, 1776 kabajatte. Woggaa 239ffaa bilisummaa itti gonfatan jechuu dha. Guyyaan kun guyyaa isaan gita-bittaa ykn colony Ingiliz jalaa itti bilisa bayanii walabummaa isaanii labsatan. Halkan keessa firework/richiitiin dhuka’aa bule.
Gammachuu isaaniitti gammadee garuu nuuti ho gita bittaa murnoota Abyssiniyaa jalaa yoom baana? Yoom akkana kabajanna? Guyyaan Bilisummaa/wolabummaa keenna yoom ta’a? jedhee of gaafadhe. Gonfachuun keenna akka hin hafne nan beeka garuu ”an ijaan argaa laata?” jedhee mami’iin if gaafadhe.
Maraafuu me haala qabsoo Ameerikaa (USA ) ilaalchisee mata-duree ”Lallaba Wolabummaa ” jedhuun barreesse tana dubbisaa.
Lallaba Wolabummaa (Declaration of independence) irraa Maal Baranna?
Bara 1492tti erga Kiristoofer Kolomboos Ameerikaa argateen duuba. Faranjoonni biyyoota Awurooppaarraa deemanii Ameerikatti qubatuu eegalan. Isaan kana keessaa kan baayyinnaan dhufaa turan England, France, Holland, Sweden fi Spain irraa ture. Baqattoonny Awurooppaa kan Ameerikaa dhufanii qubatan sababa gugurdaa sadi qaban ture.
1. Sababa woldhabdee/lola Amantii Kaatoolikii (catholik) fi protestant jiddutti Awurooppaa keessatti deemerraa kan ka’e
Akkasumalle amantaa baballisuu sababa jedhuun
2. Carraa diinagdee barbaassa- Lafti Ameerikaa duwwaa waan turteef achitti tobacco(Tamboo) fi waan garaa garaa omishanii duroomuuf
3. Sababa siyaasaarraa kan ka’e worra Awurooppaarraa baqatan.
Lola Koloneeffattoota Lameen (England and France ) Giddutti Gaggeeffame
Haa ta’uu malee Ingiliz qubsuma /settlement/colony gugurdaa 13 naannoo xarafa(coastal area) irratti ijaarrattee turte. Spain naannoo kibba Ameerikaa keessa biyyoota akka Mexico,Brazil fi kkf qabatte. Naannoo kaaba Ameerikaa toowachuuf jecha Ingilizii fi Faransaay (France) bara 1689-1763 tti lola gugurdaa afur gaggeessan. Loloota kana Ingilizitu moohate. France Kanaadaa keessa naannoo Quebek qofa tti daangofte.
Bara 1650 irraa kaasee mootummaan England Ameerikaa Kaabaa karaa lammiilee isaa qabattoota tiin toowatee bulchuu eegale. Mootummaan Faransaayis lafa hanga ta’e irraa qoodamuuf socho’e. Haaluma kanaan Konyaalee Kanaadaa Faransaayi bulchaa turteerti.
Labsiiwwan Qaraxaa fi Gibiraa
Dorgommii biyya Ameerikaa toowachuuf taasifame keessatti England fi French giddutti lolli shan gaggeeffameera. Sababa lola hedduu kanarraa kan ka’e motummaa Ingiliz kufaatiin diinagdee waan irra qaqqabdeef Naannolee Ameerikaa ofii bulchu irratti Qaraxaa fi gibira dabale. Isaan kana keessaa:
1. Sugar Act- Sukkaara biyya alaarraa seenurratti paarlaamaan Ingiliz Qaraxa buuse.
2. Currency Act- Bittaa fi Gurgurtaan mallaqa-baalaatiin (paper money) osoo hin taane Worqiin (gold)dhaan akka ta’u murteesse.
Uummanni Ameerikaa kan bittaa England jalatti kufe garuu haala kana fudhatee hin callisne. Mormii garaa garaa gaggeessuudhaan bittaa(colonization) Ingliz kana ofirraa cabse.
Mormii Diddaa Gabrummaa Matoomaa
1. “No taxation without representation”-“Bakka bu’ummaa osoo hin qabaanne/ofiin osoo of hin bulchine, gibira hin kaffallu.” Uummanni Ameerikaa nu bakka bu’oota /mirga ofiin of bulchuu waan hin qabneef gibiraaf qaraxalle hin kenninu; meeshaa mootummaan Ingilizi alaa galchulle irraa hin bitannu, jechuudhaan uuffanaa fi meeshaalee adda addaa duubatti hafaalle ta’u kanuma ofii hojjatanitti tajaajilachuun diddaa argisiisan.
Mormii Diddaa gabrummaa Lammeessoo
2. Mootummaan Ingilizi galii karaa kanaan jiru dhabuu isatiin “Stamp act of 1765”(seera teembiraa) kan jedhamu uumee wanti waraqa fakkaate marti gazeexaarraa kaasee hanga iyyannoo mana murtii fi kaartaa taphatanuutti teembirri irratti maxxanfamuu qaba jechuun karaa teembiraa kanaan beesee/mallaqa sassaabuuf labsii baase. Labsiin kun yoosuma mormiin ciman isa qunname. Uummanni fayyadamuu diduu fi alatti bayee hiriira nageyaa bahee mormuu eegale.
Wanti yennaa mara beekkamuu qabu tokko gabroomfattoomnni faayidaa wayii argachuuf /duroomuuf saba gabroomfatu. Sabni qaroon faayidaa aka isaan hin arganne karaa adda addaa itti cufa akka uummata ameerikaa kana. Gabroomfattoonni maallaqa uummatarraa guuranii rasaasaa fi garaan-bultoota itti bitanii ittiin uummata gabroomsu.
Mormii Diddaa Gabrummaa Sadeessoo
3. Bara 1767 loltoonni Ingilizi markaba lammii Ameerikaa tokko qaraxa hin kaffalle jettee aate. Worri markaballe ifirraa adhe. Uummanni Ameerikaalleen aaree ka’e. uummanni qawwee bitachuu fi loluu itti fufe. Gaafa March 5, 1770 naanoo New England jedhamutti uummanni Ameerikaa hiriira mormii bayee osoo jiruu loltoonni Ingiliz dhukaasa bananii nama 5ajjeesan. Tarkaaffiin (Bosten Massacre)-fixiinsa Bosten kun uummata ameerikaa garaa hammeesse. Uummanni ameerikaa addee cufaa ka’ee loltoonni gocha kana raawwatan murtiif dhiyaachuu qaban jedhanii falman. Mootummaan Ingilizilleen loltoota lama itti murteessee hidhaan adabe. Fincilli itti fufee uummanni Ameerikaa qabeenna shayii Ingilizi alaa fiddu eegee markabarraa abbaayaa/galaana keessatti gad-naqe. Gochi kun Ingilizootarratti kasaaraa hagana hin jenne geessisee dhiibbaa guddaa irratti uume.
Mormii Diddaa Gabrumma Afureessoo
4. April,1775 irratti lolli bilisummaaf godhamu state/naannole 13 (amma 50) keessatti itti jalqabame. Gaaffiin George Washington fa dhiyeessaa turan “Nu ofiin of bulchinee/paarlaamaa/congress mataa keenyaa akka Ameerikaatti ijarrachuu qabna; garuu nugusa Ingiland jalatti akka bullu nuuf haa eeyyamamu” kan jedhu ture. July 14,1776 irratti garuu gaafiin fincilichaa ifaa ifatti gaafii Wolabummaa/independence ta’ee lallabame. Inni kun kan nama Jafferson jedhamuun barreeffamee fi kan- The Declaration of Independence- Lallaba walabummaa jedhamee beekkamuu dha.
Lallabni Wolabummaa maal of keessaa qaba?
A. All men are created equal- ilmaan namaa marti wol-qixxee ta’anii uumaman.
B.Ilmaan namaa maraafuu uumamaan mirgoonni hin mulqamne(inalienable) kan akka mirga lubbun jirachuu (life), bilisummaa(liberty) fi gammachuu (pursuit of happiness ) rabbirraa kennameefii jira.
C. Mootummoonni mirgoota kanneen kabachiisuuf fedhii fi filannoo uummataatiin uumamu/ijaaramu.
D. Yo mootummaan mirgoota kana hin kabajnee fi hin kabajsiisnee, kan burjaajessu yokaan kan uummata cunqursu taate uummanni mootummaa akkasii kana irratti fincilee jirjiiruuf mirga guutuu qaba.
Mootummaan Ingiliz waan fedhii uummataatiin hin filaminiif akkasumas mirgoota namoomaa keenya kabajee kabachisiisaa hin jirreef nu nannoleen 13 tokko taanee wolitta dhufeenyaa fi olantummaa siyaasaa Ingiliz woliin qabnu guutumaa guututti cabsuudhaan BILISAA FI WOLABA ta’uu keenya addunyatti beeksifna. Kanaafuu nu naannoleen woliigalle ardharraa kaasnee woraana labsuu, nageya buusuu, woliigaltee uumuu,gibira guuruu fi waan mootummaan wolaba ta’e tokko godhu cufa kan godhuu dandeenyu ta’uu mirkaneessina.
Labsiin kun labsamee woggaa tokko keessatti USAn bilisa baate.
Nu Oromoon asirraa maal baranna? Namni hunda wolqixa uumamuu ni fudhannaa? Mootummaan nu bulchu mootummaa nuuti filanne? Nutti jaalatee filate mo humnaan ifiin ifi filee nu bulchaa jira? Mirgoota keenya nuuf kabajaa jiraa? Mootummaan nu bulchu wolqixxummaa keenna nuuf kabajsiisee jiraa?
Wolqixxummaan keenya nuuf kabajamee yo jiraate; mootummaa jaalannuu fi filanneen bulutti yo jiraanne waan barbaadamu cufa kaffaluun nurraa eegama. Seera kabajuu fi ajajamuun barbaachisaa dha. Kana ta’uu baannaan garuu UUMMATI MIRGA FINCILUU FI MORMUU NI QABA. Kanaafuu mirga keenya santi fayyadamnee ofirraa darbuu qabna. Mormiin keenya baasii adda addaa inni nu gaafatu baasuu diduu irraa eegaluu qabdi. Maaliif jennan qarshii nu baasne angawoota ifii ittiin nyaachisa, rasaasa nuun fixu ittiin bitata, Maallaquma nurraa guureen deebi’ee nu ukkaamsa; Radio Ameerikaaf ,Jarman ittiin ukkaamsa, silkii fi intrneetii xalafuuf ittiin gargaarama; basaastota ifii nurratti ittiin bobbaasa. Kanaafuu baasii adda addaa diduu, yo jajjabaanne hanga gibiraa fi qaraxa diduutti deemuu; karaa cufaan diinagdee isaa jalaa laamshessuun barbachisa dha. Achitti aansee hiriira bahanii sagalee dhageessisuuf wol-ijaaranii tarkaanfii san caalulle fudhachuudhaan bilisummaa gonfachuun dirqama keenya. Waaqni nama mara walqixa uume. Wolqixxumma keenya qabsoon haa mirkaneeffannu.